Fanafody tavoahangy Market - Maneran-tany Industry Analysis, Size Trends, Forecast 2016 - 2024
Ny tsena ny fanafody tavoahangy any Eoropa dia miavaka amin'ny maro ny fidirana amin'ny faritra amin'ny alalan'ny toerana stratejika ao amin'ny Saikinosy Iberika. Noho ny toerana akaiky sy ny fahari morontsiraka firenena ity, miezaka ny alalan 'ny Oseana Atlantika sy ny Ranomasina Mediterane, dia mihiaka ...Lire la suite »
Ny samy hafa karazana plastika
Mahazo fahatakarana lalina kokoa ny samy hafa karazana plastika ary izay no anaovana ny tsara indrindra ho an'ny vokatra kaontenera. Manantena izahay fa ity pejy ity dia hanampy anao Vahao fonosana fanafohezan-teny, mandinika ny ilaina ny plastika isan-karazany, ary mamaritra izay toetra dia manan-danja eo amin'ny vokatra packagi ...Lire la suite »
Inona no atao hoe farany
INONA NO A 'hahavita'? Ny fitoeran-javatra ny vozony farany mamaritra ny habe sy ny karazana fanakatonana ilaina ny fanatratrarana ny mety tombo-kase. Ny fitoeran-javatra sy ny satroka mifanaraka dia tsy maintsy manana mifanandrify vita. Fa ny tanjona, dia handinika roa samy hafa vita randram-sy ny fomba hamantarana tsirairay. The ...Lire la suite »